December | 2015 | HimiloNetwork
Zakariya December 31, 2015	Leave a comment 267 Views
Muqdisho (Himilonews) – Qiyaasta ugu badan ee rasmiga ah, dadka Lations-ka ah ee ku nool Maraykanka waxaa loo tix-geliyaa inay yihiin bulshada ugu kobaca badan. Waxaa kale oo loo tix-geliyaa inay yihiin bulshada ugu badan ee Islaamka qaata. In-kasta oo xog-ururin qoto dheer aan lagu sameynin, hadana waxaa jira 150,000 oo Lations- ah inay Islaamka qaateen Maraykanka gudihiisa. Koru-kacaan waxaa ...
Zakariya December 31, 2015	Leave a comment 463 Views
Muqdisho (Himilonews) – Markii ugu horreysay kadib 20-iyo dhowr sano, daganayaasha caasimadda Muqdisho waxay heleen beer ay ku nastaan taas oo soo jiidata indhaha boqollaal qoysas ah toddobaad kasta. Kororka dagaallada iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ma ahan nolosha qura ee lagu nool yahay. Waxaa jirta doc kale oo aysan war-fidiyeennada adduunka Soomaaliya ka tebin – Kusoo dhowow Beerta Nabadda ...
Zakariya December 31, 2015	Leave a comment 237 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xukuumadda Iran ayaa iska diiday eedeymaha ku saabsan inay Soomaaliya ku faafiso mad-habta Shiiciga. Tani ayaa timid toddobaad kahor markii dowladda Soomaaliya ay xirtay laba muwaadin oo Irani ah oo ay kusoo oogtay inay dadka gudaha Muqdisho ku dhex faafinayeen mad-habta Shiicada. Hussein Jabir Al-ansari, oo ah af-hayeenka dowladda Iran ayaa gaashaanka u daruuray eedeymaha -isaga oo ...
Zakariya December 27, 2015	Leave a comment 466 Views
Muqdisho (Himilonews) – Halka ilinka hore ee guri kasta laga heli karo geed ku hor tallaalan, oo—sida dad badani ku magacaabeen ah Geed Caanood, wuxuu door muhiim ah ku yeeshay kaalinta dhir-beeris ee deegaanka gaar ahaan magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Tan iyo sanadkii 1980-kii, geedku wuxuu ahaa mid kamid ah geedaha dhawaan-dhaladka ah ee kusoo kordhay jidadka Muqdisho. Bidhaantiisu, ...
Zakariya December 27, 2015	Leave a comment 1,744 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nafley jaadad badan leh oo, Muslimiinta iyo Yuhuudda ma ahane, dadka kale xoolo ahaan u dhaqdaan. Kan Soomaaliya jooga wuxuu leeyahay guud yar iyo gano waaweyn. Kolka uu ordayana, dabada ayuu kor lig u siiyaa. Karkarre~ Khaansiir. Waa sanku-neefle garasho dheer. Wuxuu katirsan yahay qoyska Suidae. Wuxuu badi ku dhaqan yahay Afrikada hodanka ah. Wuu daaqaa. Wuxuu leeyahay ...
Zakariya December 27, 2015	Leave a comment 1,657 Views
Muqdisho (Himilonews) – Bahal dummadda u eg kase weyn biyooloji ahaanna lagu daro bah Dinnad; wuxuu leeyahay adimmo dheerdheer, dabo gaaban, dhego dheerdheer oo timo ka taagan yihiin—labada can wuxuu ku leeyahay dhogor duf ah, waxaana la yiraahdaa wax ka arag dheer. ~ Jiifaa ama Huuris. Wuxuu badi dishaa waxaraha; kolna neefka ariga ah. Wuxuu caan ku yahay inuu jiito dilanka ...
Zakariya December 27, 2015	Leave a comment 1,167 Views
Muqdisho (Himilonews) – Gamaanka jaad kamid ah oo Afrikada hodanka ah kaliya laga helo; Dameer duureed; Farow ama ~Gunburi. Wuxuu leeyahay oogo cad oo daliigo madmadow oo dheerdheer ah kuwada dhilan yihiin. Naaxnimada darteed, dhinacyadiisa waxaa ku rarmay laallaabyo badan. Dameer farowgu waa unug-dhamaysyo dhowr ah oo kamida ah qoyska Reer Gamaan. Guud ahaan waa duunyo is-gaashaan buursata. Raxan raxan ayay ...
Zakariya December 27, 2015	Leave a comment 1,154 Views
Muqdisho (Himilonews) – Jaad nafleyda dhirta xagata kamid ah oo aad u dheereeya. Wuxuu leeyahay dhego dheerdheer, dhogor jilicsan; af bushinta kore ka faruuran—dabo gaaban iyo lugo xoog badan oo dheerdheer.Waxaa jira ku dhawaad 30 unug-dhamaysyo “species” ifka guudkiisa saaran oo Bakeyluhu u kala baxo. Iyaga oo ku kala nool deegaanno kala duwan, hadana waxay si guud u wadaagaan waxyaabo badan. ...
Zakariya December 27, 2015	Leave a comment 1,197 Views
Muqdisho (Himilonews) – Nafley adduunka joogta kan ugu dheer, wuxuuna joogaa Afrika oo kaliya; wuxuu leeyahay sur aad u dheer iyo lugo iyagana dheerdheer. Dhererkiisu wuxuu gaaraa laba mitir iyo bar; waa uu daaqaa; waana calanaqsadaa. Wuxuu leeyahay guud yar oo jilicsan oo surka kaga yaal; wax laba gees oo yaryar lamoodo oo dhegaha dhexdooda kaga yaal; harag aad u ...
Wax Maka tagaan Nolosha Biciidka?! –Hadda BARO!
Zakariya December 19, 2015	Leave a comment 1,761 Views
Muqdisho (Himilonews) – Biciidku wuxuu ku nool yahay Hawdka, Badaa’iska iyo Sudaha. Wuxuu daaqaa Doogga iyo Bilcilkaba. Labkiisu waa Saryan. Halka dheddigiisana loo yaqaan Biciid. Biciidku, markuu badan yahay ee uu meel wada joogo, waxaa loo yaqaan Yahaab Qamaamaley ah. Inkasta oo Biciidku leeyahay geeso waawayn, hadana waa ka ugu fulaysan oo wuxuu ka didaa shimbir agtiisa ka duushay. Saryanka wuu ...